ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (Covid - 19) ဆိုတာဘာလဲ ? | သိလိုရာမေး
ဒေါက်တာဒိအားမေးရန် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (Covid – 19) ဆိုတာဘာလဲ ?
Covid 19 ဆိုတာ အခု လက်ရှိ ကမ္ဘာကြီးကို ကိုင်လှုပ်နေတဲ့ ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ခေါ် Coronavirus 2019 ကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဆိုတာ လူနဲ့ တခြားတိရစ္ဆာန်တွေကို ကူးစက်တတ်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းအားဖြင့် လူသားတွေအကြားမှာ ကူးစက်ပြန့်ပွားပြီး ချောင်းဆိုးတာ၊ ကိုယ်ပူတာနဲ့ နှာရည်ယိုတာတွေလို သာမန် အဖျားရောဂါနဲ့ ဆင်တူတဲ့ လက္ခဏာတွေကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ၂၀၁၂ခုနှစ်တုန်းက ဆော်ဒီအာရေဗီးယားမှာ ပထမဦးဆုံး အတည်ပြုခဲ့တဲ့ MERS (Middle East Respiratory Syndrome) လို့ခေါ်တဲ့ ရောဂါကို ဖြစ်စေတဲ့ အမျိုးအစားလို တချို့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အမျိုးအစားတွေဟာ အဆုတ်ရောင်တာနဲ့ တခြား ပြင်းထန်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်။
အခု ကမ္ဘာ့ ကပ်ရောဂါ ဖြစ်စေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကတော့ အမျိုးအစားအသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကူးစက်ခံရသူတွေဟာ ကိုယ်အပူချိန်မြင့်တာ၊ ချောင်းဆိုးတာ၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်တာ၊ အသက်ရှူမဝတာ၊ လည်ချောင်းနာတာနဲ့ ခေါင်းကိုက်တာတွေစတဲ့ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။
လူနာတွေရဲ့ ၈၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာ မပြင်းထန်တဲ့ လက္ခဏာတွေကို ခံစားရပြီးနောက် နေပြန်ကောင်းခဲ့ပါတယ်။ ၂၀ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးဟာ အဆုတ်ရောင်တာ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ အများအပြား ယိုယွင်းတာမျိုးအထိ ပြင်းထန်တဲ့ အနေအထားတွေ ဖြစ်ပွားပါတယ်။ အသက် ၆၀ကျော်သူတွေ ဒါမှမဟုတ် သွေးတိုး၊ ဆီးချို၊ နှလုံး၊ အသက်ရှူမှုဆိုင်ရာ ဒါမှမဟုတ် ကင်ဆာ လို ရောဂါ အခံရှိသူတွေမှာ ပြင်းထန်နဲ့ အနေအထားတွေ ဖြစ်ပေါ်တာ ဒါမှမဟုတ် အသက်ဆုံးတာမျိုး ပိုပြီးဖြစ်ပွားပုံရပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေ ကူးစက်ခံရမှု အနည်းငယ် သိရှိရပြီး သူတို့ရဲ့ ဝေဒနာလက္ခဏာတွေက အတော်လေး ပေါ့ပါးပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဆိုတာ ဘာလည်း ??
ဒီပိုးက တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့အတွက် အရမ်းကြီးအသစ်၊ တစ်ခါမှ မမြင်ဖူး၊ အရမ်းသူစိမ်းဆန်တဲ့ ပိုးတစ်မျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီပိုးရဲ့ ညီအစ်ကို ပိုး ( မျိုးစိတ်တူပိုး) တွေဟာ နိုင်ငံတကာမှာ ဝင်ရောက်ပြန့်နှံ့ခဲ့ဖူးပါတယ်။
၂၀၀၂ ခုနစ် နှစ်ဦးပိုင်းမှာ civet horseshoe bat လို့ခေါ်တဲ့ လင်းနို့ တစ်မျိုးကနေစတင်ပြီး ပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့ ဆားစ် အဆုတ်ရောင်ရောဂါ (SARS) ဆိုတာ ကြားဖူးမယ်၊ မှတ်မိဦးမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံမှစတင် ပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာနဲ့ အဝှမ်း လူပေါင်း ၇၀၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ ဒါ့ပြင် သူနဲ့ မျိုးတူးပိုးမွှားတစ်မျိုးဟာလဲ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသမှာ ရှိတဲ့ ကုလားအုတ်များကနေတစ်ဆင့် လူကိုကူးစက်ပြီး MERS ဆိုတဲ့ ရောဂါကို ဖြစ်ပွားစေခဲ့ကာ နိုင်ငံပေါင်း ၂၇ နိုင်ငံမှာ လူပေါင်း ၇၅၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ အခု တရုတ်နိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဝူဟန်နမိုးနီးယားကို ဖြစ်စေတဲ့ Novel Coronavirus ဟာ SARS ရောဂါကို ဖြစ်စေတဲ့ Coronavirus နဲ့ ၇၀%လောက်တူညီတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဝူဟန်မြို့ဟာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ မြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်ပြီး လူပေါင်း ၁၁ သန်းခန့်နေထိုင်တဲ့ စည်ကားသိုက်မြိုက်တဲ့ နေရာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်က သို့လောသို့လော ဖြစ်နေရာမှ ယခု လက်ရှိသတင်း များအရ အသားငါးပေါင်းစုံရောင်းချရာ ဈေးကြီးမှ တစ်ဆင့် ကူးစက်ပြန့်နှံ့တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ကာ ယင်းဈေးကြီးကို ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ကတည်းက ပိတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းဈေးထဲမှာ ဆိုရင် ကြက်၊ လင်းနို့၊ သမင်၊ အဆိပ်ပြင်းမြွေသားများ၊ တွင်းအောင်းသားများ စုံလင်စွာရောင်းချရာ နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဈေးတွင် အလုပ်လုပ်သောသူ အများစုမှာ ဒီရောဂါပိုးကူးစက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ခုနစ်ခုမြောက် အကြီးဆုံးမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ ဝူဟန်မြို့ဟာ နိုင်ငံခြားသားများစွာ ဝင်ထွက်သွားလာရမြို့ဖြစ်ပြီး လေကြောင်းလိုင်းများဟာ ဥရောပနဲ့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။ တစ်ပတ်လျှင် ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို့သို့ လေယာဉ်ခြောက်စင်း၊ လန်ဒန်နဲ့ ရောမမြို့များကို တစ်ပတ်လျှင် ၄ ကြိမ်မှ ၅ ကြိမ်ခန့်အထိ ပြေးဆွဲနေတာကြောင့် ဥရောပနိုင်ငံများအနေနဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုမြင့်တက်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
coronavirus များဟာ တိရစ္ဆာန်များရဲ့ ကိုယ်ခန္ဒာထဲမှာ အချိန်အတော်ကြာနေထိုင်နိုင်ပြီး မြင့်မားတဲ့ အပူရှိန်ပေးမှသာ ဒီပိုးတွေဟာ သေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယင်းအသားစိမ်းများကို ထိတွေ့ကိုင်တွယ် ရောင်းချသူများ၊ မကျက်တကျက် (သို့) အစိမ်းစားလေ့ရှိသူများကို ယင်းဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာ စတင်ကူးစက်ပါတယ်။
ကူးစက်မှုနှုန်း (transmission rate)
Coronavirus ဟာ လူလူချင်း ကူးစက်တဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး Droplet infection လို့ခေါ်တဲ့ ချောင်းဆိုးတဲ့အခါ ၊ နှာချေတဲ့ အခါထွက်တဲ့ အရည်ထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ရောဂါပိုးရှိသူရဲ့ ၆ ပေပတ်လည့်အထိ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ နှာချေလိုက်တဲ့အခါ droplet ထိစပ်ရာမျက်နှာပြင်များ၊ လက်ရန်းများကို ကိုင်တွယ်မိခြင်းမှ တစ်ဆင့် ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
ကူးစက်မှုနှုန်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးပြောရရင် Coronavirus ကူးစက်ခံရသော်လည်း ရောဂါလက္ခဏာမပြသေးသူ ထက် Coronavirus ကူးစက်ခံရပြီး ရောဂါအပြင်းအထန်ခံစားနေရတဲ့သူကနေ အခြားသူတွေကို ကူးစက်ဖို့ အခွင့်အလမ်းအများဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့ကတော့ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရပေမယ့် မဖျားနာနေရင်တော့ ကူးစက်နိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းနည်းပါတယ်။
သာမန်လူသားတိုင်းကို ကူးစက်နိုင်ပေမယ့် နဂိုကိုယ်ခံအားနည်းသူတွေ၊ ဖျားနာနေသူတွေ၊ ငယ်လွန်းသော ကလေးငယ်တွေ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ အိပ်ယာပေါ် ကြာရှည်စွာ လှဲလျောင်းနေရသူများ စတဲ့ သူတွေမှာ ပိုမို ရောဂါပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။
ရောဂါပိုး၏ ခံနိုင်ရည်(Life-Span of Virus)
လော့အိန်ဂျယ်လိစ့်မှ ပညာရှင်များရဲ့ လေ့လာစမ်းသပ်မှုအရ coronavirus ဟာ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် လေထဲမှာ ၃ နာရီခန့်၊ ကြေးနီပေါ်မှာ ၄ နာရီခန့်၊ ကတ်ထူတွေ၊ စက္ကူတွေအပေါ်မှာ ဆိုရင် ၂၄ နာရီခန့်၊ ပလတ်စတစ်တွေ၊သံထည်တွေပေါ်မှာဆိုရင် ၂ ရက်မှ သုံးရက်ခန့်အထိ အသက်ရှင်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပိုးတွေထဲမှ အများစုဟာ အခန်းအပူချိန် 86 F ( 30 C) ထက် များတဲ့ အပူချိန်မှာ အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။
ရောဂါလက္ခဏာတွေဟာ အခြေအနေတွေပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားမှုရှိပါတယ်။ အဓိကရောဂါလက္ခဏာ သုံးခုကတော့
အသက်ရှုကြပ်ခြင်း စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ မိမိ မိသားစုနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဒီလို ရောဂါလက္ခဏာတွေ ခံစားလာရရင် တော့ သက်ဆိုင်ရာ ဆေးရုံဆေးခန်းကို အမြန်ဆုံးသွားရောက်သင့်ပါတယ်။
နောက်ဆက်တွဲ ပြင်းထန်လက္ခဏာတွေ အနေနဲ့တော့ အရေးပေါ် လက္ခဏာတွေကို သတိပြု စောင့်ကြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကတော့
ရင်ဘတ် စူးအောင့်ခြင်း၊ ရင်ဘတ်ကို တစ်ခုခုနှင့် ဖိထားသလို ခံစားရခြင်း
နှုတ်ခမ်း၊ မျက်နှာတို့ ပြာနှမ်းလာခြင်း စတဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့ အရေးပေါ်လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေထဲက တစ်ခုခု ဖြစ်တာတွေ့တာနဲ့ အမြန်ဆုံးသက်ဆိုင်ရာကို အကြောင်းကြားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။